I-Harley Quinn yithanda iikowuti Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
I-Joker kunye ne-Harley Quinn ayisiyiyo into yokuthandana efunwa nangubani na, ubuncinci kunaleyo kufuneka ibuyiselwe ebomini. Kodwa kukho amanye amabinzana avela kwiJoker avakala ngathi athandana, ukuba uyaphambana.
1 Harley quinn uthando iikowuti
2 Harley quinn ucaphula uthando ucaphula
3 Iingcaphuno zika-Harley quinn zempambano
4 Harley Quinn Uthando lweeVideos
"Emva kwayo yonke impambano enkulu, kukho inyani enkulu."
"Mna nawe sigwetyelwe ukuhlala ngoluhlobo ubomi."
"Awunakuphila ngaphandle kwam. Ungayenza? Yile nto yenzekayo xa amandla angenakuthinteleka angqubana nento engenakushukuma.
"Uxolo, ndikuphosile ngothando lobomi bam, kodwa enkosi kunjalo, uhlala ufunda okuthile kwiimpazamo zakho."
"Kuya kufuneka ubenayo i-ace phezulu kumkhono wakho, owam nguHarvey."
Nokuba womelele kangakanani na, uthando luyakwenza ukuba ungoyena mntu ubuthathaka emhlabeni.
«Ukhe wadanisa kunye usathana ekukhanyeni okumhlophe kwe la luna? »
Ihlaya lokwenyani kukuqiniseka kwakho ukuba ngandlela thile, kwenye indawo, konke kuyavakala. Yiloo nto endihlekisayo ngalo lonke ixesha! "
Harley quinn ucaphula uthando ucaphula
Ngaba ngokwenene ndibonakala njengendoda enecebo? Andinacebo. Uyayazi into endiyiyo, Harvey? Ndifana nenja ebaleka imoto. Bendingazokwazi ukuba ndenze ntoni xa ndidibana nenye.
"Uyakwazo oko? Ndazise xa uqala ukuthatha izinto kancinci ngakumbi.
"Ndifuna ukukubulela ngoba yintiyo yakho eyandinika amandla."
Andililo irhamncwa… ndilinyathelo nje elinye.
Usisigebenga kubo, njengam.
Ndiyingqinile inqaku lam. Ndibonisile ukuba akukho mahluko phakathi kwam nabanye. "
"Sayeka ukukhangela izilo phantsi kwebhedi, xa saqonda ukuba bangaphakathi kwethu."
"Ndiyakuthanda, kodwa ndifuna ukukubulala."
Iingcaphuno zika-Harley quinn zempambano
"Yintoni engakubulali ikwenza ungaziwa."
"Emva kwayo yonke impambano enkulu kukho inyani enkulu."
"Ukuba ulungile kwinto ethile, ungaze uyenze simahla."
"Unemigaqo emininzi kwaye ucinga ukuba iyakukugcina."
"Ukuba ufuna ukwenza into ngokuchanekileyo akufuneki uyenze ngokwakho, ungaze uthumele omnye umntu."
"Eyona ndlela isengqiqweni yokuphila kulo mhlaba ngaphandle kwemigaqo."
"Ukuhlanya, njengoko uyazi, kufana nomxhuzulane, konke okudingayo kukutyhala kancinci."
"Ukuba ndiza kuba nexesha elidlulileyo, kungcono ndikhethe izinto ezininzi."
"Uyafa uliqhawe okanye uphile ixesha elide ngokwaneleyo ukuba ube sisikhohlakali."
"Misela isiphithiphithi, phazamisa ucwangco kwaye isiphithiphithi siza kulawula."
Kuthatha kuphela usuku olunye olubi ukuqhuba umntu ococekileyo emhlabeni ukuba abe ligeza. Kukude kangakanani ke el mundo apho ndivela khona, lusuku olubi nje. "
Kutheni singakusiki kwaye siphose izilwanyana zasekhaya kuwe? Ke siyayibona indlela athembeke ngayo inja xa ilambile.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kutheni ndisebenzisa imela? Izixhobo zikhawuleza kakhulu, azikuvumeli ungcamle zonke ezo zinto zincinci.
"Xa abantu bezokufa bazibonakalise ukuba bayintoni."
Bangaphi abahlobo bakho endibabuleleyo?
"Ngoku ndiyabona ubumnandi kuyo, ndihlala ndincuma!"
"Ukuba ubomi bubonakala bubi kangaka ... ... musa ukuvukela, yiya uphambene!"
"Uyazi, undikhumbuza utata wam ... ndandimcaphukela utata!"
"Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zezantoni ezi zinto?"
Oyena mntu ubalulekileyo sisixeko. Oyena mntu ungenakubulala. Wenze umsebenzi, kwaye sinciphise isigwebo sakho. Silela ekuthumeleni, kwaye uya kufa.
Harley Quinn Uthando lweeVideos